सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरुबीच जुहारी, नेप्सेमा सूचीकृत कति कम्पनी भए आवद्ध ?
काठमाडौं : पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच जुहारी जस्तै चलेको छ । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पटकपटक कोषमा आवद्ध हुन सूचना जारी गरेको छ । यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने अझै पनि यसमा आवद्ध हुने चासो देखाएका छैनन् । यसैबीच, कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूसँग आवद्ध हुन दबाब दिएपछि केही समय पहिले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले त विज्ञप्ति नै निकालेर खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन लगाइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत ५२ कम्पनीका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध
हालसम्म नेप्सेमा सूचीकृत ५२ वटा कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले नेपाली पैसालाई जानकारी दिए । ५२ कम्पनीमध्ये ११ वाणिज्य बैंक, ३ वटा विकास बैंक र ७ फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् । त्यस्तै, ३३ वटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरु पनि कोषमा आवद्ध भएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । आवद्ध हुने सूचीकृत संस्थाहरुमध्ये धेरै बिमा कम्पनीहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै, सूचीकृत र सूचीकृत हुन बाँकी गरेर ३५ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु पनि कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । ८८९ वटा सहकारी, ३४ वटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, १५ वटा मनिट्रान्सफरहरु पनि आवद्ध भएका छन् । प्रवक्ता पन्थीका अनुसार हालसम्म १ हजार १०१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब ११ हजार जना कर्मचारी समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
हालसम्म ५ अर्ब ९६ करोड संकलन
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, यसबीचमा २ लाख २४ हजार १६१ जना योगदानकर्ता मात्र सहभागी छन् । उनीहरुको योगदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषले ९ करोड ५ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
असार मसान्तसम्म कोषमा सहभागी नभए के कारबाही हुन्छ ?
२०७८ असार मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर संविधान र कानुनको पालना गर्नु भन्दै कोषले सूचना जारी गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन भएपछि सोही अनुसार योगदानमा आधारित हुने भनेको छ । २०७६ साउन एक गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएको हो । पहिलो पटक ६ महिनाभित्र आइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । नेपालको पहिलो अभ्यास भएकाले कोषले आफ्नो नियम दोस्रो पटक संशोधन गरिसकेको छ ।
तथापि, कसैले सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सुविधा दिएको छैन सो संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा सरह सुविधा दिन निर्देशन दिने र सो निर्देशन अटेर गरे उसको चल–अचल सम्पतिबाट सरकारी बिगोसरह असुल उपर गरेर सम्बन्धित योगदानकर्तालाई भरपाइ गर्ने दायित्व समाजिक सुरक्षा कोषलाई छ । सामाजिक सुरक्ष कोषमा आवद्ध नभएको संस्थालाई २०७६ पछिको रकम जम्मा गर्न लगाउने र नमानेमा कोषले असुल उपर गरेर योगदानकर्तालाई दिनेछ ।